युवाले नेतृत्व हत्याउने बेला आएन र ?: विनोद घिमिरे - muktikhabar
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	मंसिर २६, २०७८
युवा भन्नाले सामान्यतया १५ देखि ३९ वर्ष समुहका मानिसहरुलाई बुझ्ने गरिन्छ तर मेरो विचारमा युवा त्यो हो जोसँग जिज्ञासु भाव अनुसन्धानमूलक चित्र, कर्मशील हात र समय सुहाउँदो तार्किक उत्पादनमुलक सोच विचार हुन्छ जो साहसी छ र कुनै पनि किसिमका डरबाट भाग्ने काम गदैन । पश्चिमका प्रख्यात दर्शनिकले भनेका छन् – युवा त्यो हो जो खतरादेखि डराउँदैन ।
राष्ट्र निमार्णमा युवा वर्गको सर्वोच्च र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । युवासँग त्यो आदम्य साहस हुन्छ जुन तेलले नै विकासको रेल अघि बढ्दछ । डा. योगी विकासनन्दले भनेका छन् संसारलाई बदल्नु छ त सुरु आफैँबाट गर्नुछ । उसैगरी गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रलाइ परिवर्तन गर्नुछ त युवाहरुकने परिचालन गर्नुपर्छ । युवाहरुको जिवन्त स्रोत तथा शक्तिलाई अघि ल्याउन सके राष्ट्र समुज्वल र शान्त हुन्छ । युवाले पहाडलाई फोरेर मैदान बनाउन सक्छ । युवाले मरुभमिमा हरियाली वातावरण छाउन सक्छ र युवाले सगरमाथाको शिरमा पुगेर उत्प्रेरणा जगाउन सक्छ ।
कुनैपनि देश कत्ति सम्पन्न र शक्तिशाली छ ? भन्ने कुरा त्यो देशको विकासको गति रेखाले निर्धारण गर्छ । यदी विकासको गति सुस्त छ भने त्यो देशले सम्पन्नताको शिखर चुम्न सक्दैन वरु गरिवी, अभाव, अशान्ति, युद्ध, भोकमरी, अशिक्षा, रोगब्याधि अनेक कष्ट झेलिरहेको हुन्छ ।
ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति विश्वमा कहिले हुँदैन विफल भनेझैँ युवा आफूभित्र रहेको जिवन्त तरुणतालाई सकारात्मक तवरले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र निमार्णका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, प्राविधिक इत्यादि क्षेत्रहरुमा युवाको पहुँचतालाई बढाउनु जरुरी छ ।
“उद्धेश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक” भनेझैँ हरेक युवाले आफूभित्र रहेको साथै खोज, रुचि, चाहना क्षमता अनि दक्षता अनुसारको लक्ष्य लिन आवश्यक छ । लक्ष्य लिँदा हरेक युवा एक ठाउँमाजम्मा भई राष्ट्रको आवस्था के कस्तो छ त भनेर विचार विर्मश राख्न आवश्यक छ ।
आज गाउँका उर्वर भूमिहरु त्यसै बाँझो पल्टिएका छन । हरेक बर्ष भारत, चीन र विदेशवाट अन्न, फलफूल, तरकारी किनेर ल्याउनु परेको छ । लाखौं युवाहरु जीन्दगीभर हड्डी घोटेर बुढ्यौलीमा टेकेका आमा, वुवा, कलिला वच्चा र सुत्केरी श्रीमतिलाई भत्कन लागेको घरमा छाडेर परदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पुगिरहेका छन । काठमाडौंको त्रिभूवन विमानस्थल र भारतीय सीमा क्षेत्रमा देश र परिवारसँगको विछोडमा आँसुको धारा वगाउँदै सुक्कसुक्क रुदै परदेशी बनेका युवाहरु देख्दा जो कोही देशभक्त नागरिकको हृदय धुजाधुजा बनेर चिरिन्छ । आँखाहरुमा पीडा, वेदनाका आँसुहरु छचल्किन्छ ।
यदि विकासको गति तीव्र छ भने सजिलै सुख, शान्ति, समृद्धि छाउँछ । देशका नागरिक सधै हाँसी, खुसी, मिलनसार, स्वस्थ्य, सक्षम, सवल, सिपयुक्त हुन्छन । चारैतिर विकासको समृद्धिको ढोका कसरी खुल्छ त ? विकासको मुलस्रोत कहाँबाट आउँछ ? विकसित देशका इतिहासका पाना पल्टाउँदै जाने हो युवा शक्ति नै देशको विकास र समृद्धिको मुहान हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अहिले देशमा गुञ्जिरहेको राजनीतिक समस्यालाई सुधार्ने वा यसलाई मिलाएर राजनीतिलाई फरक किसिमले अगाडी बढाउनु नै युवाको कर्तव्य हो । युवाले नयाँ–नयाँ खोज र सकारात्मक सोच गरी नयाँ किसिमले अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र निर्माणको मूल यात्रा युवाबाट नै चल्नु पर्छ । त्यसले युवावर्गले निःस्वार्थ भावना र चाहनालाई मनन गर्दै देशमा ठूलो परिवर्तन निम्त्याउन सक्छौँ । यस्तै विज्ञान र प्रविधिको युगका कारण विश्वमा परिवर्तन आएता पनि त्यो केवल युवाहरुको जोश जाँगरले मात्र सम्भव भएको हो । युवा शक्तिको प्रयोग गरी देश निर्माण गर्नु नै उज्ज्वल भविष्यको सुनिश्चित गर्नु हो ।
युवाहरू हालका घटनाहरू र नवीनतम टेक्नोलोजीको साथ अप टु डेट छन्। त्यसोभए, तिनीहरू धेरै कामका लागि उपयुक्त छन्। आज युवाहरू जोखिम लिन, चुनौतिहरूको सामना गर्न र आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कडा प्रयत्न गर्न तयार छन्। तिनीहरू आफैंमा र आफ्ना क्षमताहरूमा विश्वास गर्छन् उनीहरूको उत्कटतालाई पेशामा बदल्न जुन उनीहरूलाई अधिक सफल बनाउँदछ। युवाहरू देशलाई राम्रो ठाउँ बनाउन चाहन्छन्। उनीहरूले राष्ट्रको प्रणालीको आलोचना गर्न सक्दछन् र समाजलाई अझ राम्रो ठाउँ बनाउने दिशामा परिवर्तन ल्याउन खडा हुन सक्छन्।
(लेखक घिमिरे अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासंघका केन्द्रिय सदस्य हुन् !)
२६ मंसिर २०७८, आइतवार १३:३१ बजे प्रकाशित
जनयुद्धमा ८ वर्ष जेल जीवन बिताएका सांसद खड्का माओवादीको बागमती प्रदेश अध्यक्षका दाबेदार !
क्यानको कारबाही नेपाली क्रिकेटमा प्रतिगमन: विनोद घिमिरे